Al Shabaab oo Weerar Khasaaro kala duwan dhaliyay ku qaaday Gudaha Kenya Edit This Post – Balcad.com Teyteyleey
Al Shabaab oo Weerar Khasaaro kala duwan dhaliyay ku qaaday Gudaha Kenya Edit This Post
By Abdi Malik	 On Aug 3, 2017
Dagaalyahano hubeesan oo katirsan kooxda Al Shabaab ayaa xalay weerar xoogan waxa ay ku qaadeen saldhig ciidanka booliiska ku lahaayeen Deegaanka Lafey oo kuyaala duleedka magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya.
Weerarkan ayaa la sheegay in Al Shabaab ku dileen ciidamo katirsan booliiska dalka Kenya, waxa ayna Al Shabaab gubeen gaadiid iyo agab kale ay lahaayeen ciidanka booliiska halka ay horey usii wateen gaadiid kale oo saldhiga yaalay.
Saraakiil u hadashay booliiska dalka Kenya ayaa sheegay in weerarka ay ka dambeeyeen dagaalyahano hubeesan oo lagu qiyaasay 50- dagaalyahan, waxa ayna booliisku sheegeen in booliiska is difaaceen ayna khasaaro gaarsiiyeen dagaalyahanada Al Shabaab.
Maxamed Salax oo xiriiriyaha gobolka waqooyi bari Kenya oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in booliiska Khasaaro kala duwan uu kasoo gaaray weerarkii xalay dhacay, waxa uuna tilmaamay in gaari iyo agab kale ay saldhiga ka qaateen Al Shabaab.
Al Shabaab ayaa marar badan weeraro isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxa ay ku qaadeen saldhigyo iyo xarumo kale oo kuyaala dalka Kenya, waxaana weerarkan xalay uu imaanayaa xili la adkeeyay amaanka Kenya oo maalmo kadib ay ka dhacayaan Doorashooyin.
The post Al Shabaab oo Weerar Khasaaro kala duwan dhaliyay ku qaaday Gudaha Kenya Edit This Post appeared first on Ilwareed Online.
R/Wasaare Kheyre “Taliyeyaasha ciidamada waxaa la idinka rabaa inaad isku soo dhaweysaan ciidanka” (Dhageyso)
Guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka oo shir guddoomiyay kulankii guddiyada joogtada ah